SBO: Ibsa Ejjennoo Minseensota ABO Konyaa Oromia – Minnesota. – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSBO: Ibsa Ejjennoo Minseensota ABO Konyaa Oromia – Minnesota.
[SBO – Onkoloolessa 13,2020] Kallachi Qabsoo Bilisummaa Ummata Oromoo, ABOn balaa Oromoo fi Oromiyaa akkasumas Biyyattii waliigalaa irratti aggaammate ilaalchisee furmaata Siyaasaa yeroo irraa yerootti dhiheessaa as ga’uun ni yaadatama.
Haalli kun hammaataa dhufee daranuu Biyyittiin mootummaa seerawaa (legitimate) dhabuun baadii caalaatti Biyyicha geessaa waan dhufeef badii kana hambisuuf yaada Mootummaa Ce’umsaa sadarkaa Oromiyaatti hundeessuu ibsuun Ibsa baasunsaa ni beekama.
Kana irratti hundaa’uun Miseensotni ABO Konya Oromia-Minnesota gaafa Onkloloolessa 11, 2020 walgahii idilee irratti ballinaan mari’atuun tattaaffii Dhaabni Keenya ABOn mootummaa ce’umsaa utubuuf humnoota siyaasaa Oromoo walaba ta’an waliin hojjechaa jiru milkeessuuf dirqama kanas ofitti fudhannee ibsa deggersa baasnee jirra.
Kanas milkeessuuf qajeelfama caasaan dhaabaa sadarkaa hundaan nuuf dhaamu hordofnee caasaalee ABO Biyya alaa fi Biyya keessaa waliin ta’uun akka deeggarruu fi dirqama nurraa eegamu mara bahachuuf qophii tahuu keenya irra deebinee ibsina.
Ummatni Oromoo boqonnaa amma irra geenye kanaaf akka of qopheessuu dhaamaa, Sabaa fi sablammoonni Mirgi isaani guutummatti akka kabajamuuf yaada Furmaataa Mootummaa ceehumsaa hundeessuuf ABOn labse cinaa dhaabbatanii tumsa barbaachisu akka godhaniif waamicha keenya goonaaf.
Dirqama seenaa Ummatni Oromoo fi ABOn ofitti fudhatan milkeesuun dirqama addaa waan gaafatuuf akkuma asin olitti tuttuqne Caasaleen ABO Biyya alaa fi Biyya keessaa harka wal qabannee adeemsa kana itti fufuuf miseensotni ABO Konyaa Oromia-Minnesotatis deeggersa keenya ibsa ejjennoo fi kutannoolee asin gaditti tarressineen mirkaneessina.
1. Mootummaan ce’umsaa Oromiyaa Utubuuf murti dhaabni keenya ABOn godhe deeggeraa fiixa bahiinsa isaatiif waan barbaachisu maraa ni gumaachina.
2. Jaarmiyaalee fi hunootni Siyaasaa Oromoo walaba ta’an martinuu waamicha Jaarmiyaa Oromoo angaftichaa fudhatuun Biyyi kan waloo ta’uu hubatuun deggersaa guutuu kennuun akka qooda isaanii bahan ni hubachiisna.
3. Hawaasni Oromoo, Hayyootni Biyya keessaa fi alaa, Abbootiin Gadaa, Haati Siiqqee, Qeerroon Oromoo fi Ummatni keenya martinuu Alaa fi keessan harka wal qabatee Mootummaa Oromiyaa ijaarrachuu irratti gahee isaanii akka bahan gadi jabeessinee dhaammachaa nutis qaamoolee hunda waliin of qusannaa tokko malee hojjechuuf waadaa galla.
4. Ummatootni Itoophiyaa akkasumas Sabaa fi Sablammoonni cunqurfamoon Biyyittii kanneen Oromoo waliin hiree fi seenaa walfakkaataa qaban kamiyyuu yaada, nagaa fi tasgabbii umuuf akeekkatame kanaaf akka tumsaan waamicha keenya dhiheessinaaf.
5. Humnootni Siyaasaa Biyyattii keessa socho’an,Gamtaan Afrikaa fi Hawwasni Adunya martinuu akeekni mootummaa Ce’umsaa ABOn wixiname nagaa fi tasgabbii waligalaatiif murteessaa ta’uu hubatanii deeggarsa feesisu hundaa kara diinagdee, qabeenya, gargaarsa nageenyaa fi kan Diplomaasii akka kennan gadi jabeessinee dhaamna.
Injifannoon Uummta Oroomf!
Mootummaan ce’umsaa Oromia wabii nagaa fi tasgabbii waigalaati!!
Konya ABO Oromia – Minnesota
Minneapolis/Saint Paul Minnesota
IBSA EJJENNOO MISEENSOTA KONYAA ABO SWEDEN BITOOTESSA 14/ 2021 Korri Sabaa, Shira Diinaa Fi Gantootan…
Ibsa Ijjannoo - Konyaa ABO Victoria, Australia
Ibsa Ijjannoo - Konyaa ABO Victoria, Australia Guyyaa: 13 Amajjii bara 2019 Nuti miseensotni ABO,…